Ny fanoherana ny fiaraha-monina rehetra? Marina ve? | Martech Zone
Alatsinainy, Aogositra 16, 2010 Alatsinainy Desambra 29, 2014 Douglas Karr
Wow, ity dia fanambarana iray avy any Avinash amin'ny famoahana ghostblog:
Raha tsy manam-potoana hanaovana bilaogy ianao dia aza manao izany. Ny bilaogy Ghost dia tsy mitombina sy ny fanoherana ny zavatra sosialy rehetra. #azabeafake cc @mitchjoel
- Avinash Kaushik (@avinash) Aogositra 16, 2010
Mahaliana foana rehefa misy olona manana fahefana betsaka toa Mitch or Avinash manipy a fitsipika toa izao. Tsy hoe tsy miombon-kevitra amin'i Avinash fotsiny aho, fantatro fa orinasa maro izay tsy hanaiky koa. Ghostblogging Tsy ny mifanohitra amin'ny zava-drehetra ara-tsosialy… tsy fahatokisana, tsy fahamarinan-toetra, ary fahitsim-po ny no mifanohitra amin'ny sosialy rehetra.
Voatosika hanao zavatra betsaka kokoa ny orinasa raha tsy misy ny loharanom-pahalalana ilaina nandritra ny taona maro. Vao haingana i Accenture no nanao fanadihadiana izay nanondro izany teti-bola tsy ampy, tsy fahampian'ny fahaizana ary fitaovana tsy ampy dia hery manery ao ambadiky ny sampan-draharaha marketing tsy mahomby.
Ahoana raha tsy manana teti-bola ny orinasanao, tsy manana ny fahaiza-manao na tsy manana fitaovana hanaovana bilaogy? Na izany aza, ny orinasanao dia maniry ny hamoaka ny toha-pahalalana sy hizara tantaram-mpanjifa tsy mampino amin'ny Internet. Azon'izy ireo atao izany amin'ny fomba tsy lafo amin'ny ghostbloggers - izay mahatakatra ny fomba fanoratana am-pahombiazana, ny fomba fampiasana ny teny lakile amin'ny fomba mahomby, ary ny fananana ny fitaovana ilain'izy ireo hanaraha-maso ny fahombiazan'ny mpanjifa. Ghostbloggers dia mety afaka manao azy tsara kokoa, haingana kokoa ary misy valiny lehibe kokoa.
Manana mpamaham-bolongana vitsivitsy aho Martech Zone fa manana aho matoatoa satria… satria nanohy nilaza tamiko izy ireo fa tsy manam-potoana. Ka dia nandefa azy ireo mailaka fanontaniana ara-dalàna izay niainany aho. Nanoratra valiny izy ireo tamin'ny alàlan'ny loharano sasany an-tserasera izay mety hanampy. Noraisiko avy eo ny mailak'izy ireo, naveriko tao anaty bilaogy mahomby ary nangataka ny fahazoan-dàlan'izy ireo handefa izany amin'ny anarany. Isaky ny nanaiky avy hatrany ilay olona ary nisaotra ahy nanao ilay lahatsoratra.
Tsy nizara aho fa tena nanoratra ilay lahatsoratra… Nametraka ny fanontaniana fotsiny aho. Ny valiny dia tamim-pahatsorana, marina ary nizara vaovao sarobidy tamin'ny mpihaino anay. Raha atao teny hafa, dia nibontsina sy nanome lanja ny mpamaky izahay. Izany ve no mifanohitra amin'ny fiarahamonina? Heveriko fa tsia! Na dia manaja be an'i Avinash aza aho dia tsy izy no mitandrina ny zavatra rehetra ara-tsosialy amin'ny harato. Raiso ny sainao manokana. Raha mahomby dia ataovy. Raha tsy izany dia aza.
Efa naverimberiko foana io… mieritreritra ve ianao fa i Barack Obama, izay azo lazaina ho iray amin'ireo mpandahateny tsara indrindra amin'izao androntsika izao, dia tsy marim-pototra satria tsy manoratra ny kabariny manokana? Moa ve isika mampody azy ary milaza aminy fa izy no mifanohitra amin'ny zavatra omen'ny besinimaro? Tsia! Ekentsika fa, amin'ny maha-mpitarika an'ity tontolo malalaka ity, dia manana loharanom-pahalalana manampy azy hamorona kabary voasoratra am-peo ao an-tsainy izy.
Raha tsy manam-potoana hanoratana ianao, dia te hamoaka ny teny momba ny vokatrao na serivisinao… ary maniry ny ho tso-po sy tena izy ianao, mety ho tetika lehibe ny fitorahana ghostblogging. Tsy miresaka momba ny fandehanana sy fividianana lahatsoratra amin'ny Internet 5 dolara pop iray aho. Aleoko kokoa mamoaka lahatsoratra bilaogy voasoratra tsara izay manome ny mpamaky ny fampahalalana ilain'izy ireo avy amin'ny orinasa nohadihadian'izy ireo… toy izay lahatsoratra bilaogy an-tsoratra voasoratra haingana, avy amin'ny CEO iray nefa tsy misy fotoana.
Ary mazava ho azy, tsy miaro ny tsy fahamarinana aho. Raha fanamby ianao momba izay manoratra ny bilaoginao dia lazao azy ireo ny marina! Ho tia anao amin'izany ny ghostblogger anao.
Sal: Izaho no nanoratra ny lahatsoratry ny bilaogiko rehetra.
Email amin'ny Desktop: Mbola ilay Mpanjaka mpamokatra